बोक्सी भन्दै कुट्नेहरुले अब जेलको चिसो हावा खाने, को को परे ?::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
बोक्सी भन्दै कुट्नेहरुले अब जेलको चिसो हावा खाने, को को परे ?
कैलाली- कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका वडा नम्बर ५ देउकलियाकी २० वर्षीया राधा चौधरीलाई ‘बोक्सी’ भन्दै कुटपीट गर्नेविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
‘बोक्सी’ भगाउन भन्दै भोलेबाबा भनिने रामबहादुर चौधरी र किस्मिता चौधरी (पार्वतीमाता) ले गत बिहीबार राधालाई समाजको सामु्न्नेमा लगातार ६ घन्टासम्म कुटपीट गरेका थिए । कुटाइबाट वेहोस बनेकी राधाको हाल सेती अञ्चल अस्पताल धनगढीमा उपचार भइरहेको छ।
प्रहरीले कुटपिटमा संलग्न उनीहरुलाई पक्राउ गरेपनि सामान्य मिलापत्र गराएर छोडेको थियो । घटना सार्वजनिक भएपछि हरेक ठाउँबाट टिकाटिप्पणीहरु आउन थालेपनि प्रहरीले पक्राउ दोषीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । यस्तै, इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव निरीक्षक दिनेशबहादुर विष्टलाई पनि कारबाही गरिएको कैलाली प्रहरीका प्रवक्ता सागर बोहराले जानकारी दिएका छन् । त्यस्तै घटनामा संलग्न अन्यबारे पनि अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए।
अदालतमा बोक्सी अपराध दण्ड सजाय ऐन अनुसार मुद्दा दर्ता गरी पीडकहरु विरुद्ध म्याद थप गरिएको प्रवक्ता बोहराले जानकारी दिएका छन् । सो ऐनमा कसुरको मात्रा हेरी दुई वर्षदेखि ८ वर्षसम्म जेल सजाय र ५० हजारसम्म जरिवाना भराउने प्रावधान छ।